Etemeete ahịhịa-11 ahịhịa
Omenala logo nzuzo nke onwe emebe ahịhịa 11pcs nwa ịchọ mma brushes setịpụrụ na ntutu dị elu sịntetik.
Nke mbu:Ihe omuma a nke etemeete etemeete bu nke ejiji na ahia, ntutu ndi eji eme ihe bu ihe di nro ma di nma. Ihe eji eme ihe bu osisi nke di nma ma di nma.
Ihe dị elu nke ejiri sịntetik sịntetik mee, dị nro ma dị mma, na-enye mmetụ dị nro na nke na-adịghị awụfu sịlịntị sịntetik iji hụ na usoro ntinye dị nro na iji ahụmịhe.
Nke abụọ ị metụrụ otu n'ime brushes ndị a na ntì gị, ị ga-eju etu ị ga-esi dị nro. Ntọala a pụtara iji gosipụta mmetụta nke etemeete ikuku, nke pụtara na ntọala gị, ihe mkpuchi, na blush ga-etinye ntụpọ.
Aha ngwaahịa Ihe onwunwe Dị Ihe kwa set Nha Akara Ngwugwu
Etemeete ahịhịa set Sịntetik ntutu, osisi ahụ ejiji 11 Ngwaahia size Ahaziri logo Ngwaahia mbukota
Nchịkọta zuru ezu bụ brushes 11 na-eji aka kachasị mma ejiri aka vegan synthetic bristles. Ihe ndị ahụ na-enyere aka na-enye njikwa kachasị na ntinye etemeete iji nyere gị aka ịmepụta ihe ịchọ mma ọ bụla ịchọrọ. Nke a ahịhịa ahụ e mepụtara akpọrọ.
Nke mbụ:Ọtụtụ ndị ahịa na-enye anyị nyocha dị elu mgbe ha nwalere, brushes anyị dị elu, n'ihi na anyị bụ ụlọ ọrụ etemeete, anyị nwere afọ iri na ise nke ọrụ aka na mpaghara a.
Ternkpụrụ nhazi na ahịrị ihu kwesịrị ekwesị, kwesịrị ekwesị maka etemeete kwa ụbọchị ma nwee ike ịmepụta ihe na-enweghị ntụpọ maka gị.
Ọ bụrụ n'ị na-achọ nhọrọ mmekọrịta gburugburu ebe obibi, ahịhịa a dị mkpa sitere na EcoTools bụ ihe dị mkpa. Ha bụ 100% vegan ma mee site na aluminom megharịrị.
Nke mbụ:Ngwa etemeete anyị bụ ngwa ọrụ na-enweghị ntụpọ ị na-eji aza, swirl, ma jikọta ya n'otu ebe. Ma ọ bụrụ na ị na-eke anya na-acha anwụrụ ọkụ ma ọ bụ na-ehichapụ ihu, ndị a bụ usoro ịchọrọ na ngwa agha gị.
Nkuzi nkuzi nkuzi a gunyere ihe di nkpa maka inyere gi aka imeputa ihe adighi nma. Ntọala ahụ gụnyere ahịhịa ntọala iji tinye ntọala gị, ahịhịa buffing ka ọ dị mma, ihe nfe mkpuchi zuru ezu iji kpuchie ezughị oke, yana akwa mkpuchi mkpuchi buru ibu maka n'okpuru anya na gburugburu imi imi. Uwe ejiji ntụ ntụ na-enye ihe niile na-emecha maka anya na-enweghị ntụpọ. Nhicha niile nwere ike ịbụ na obere akpa akpụkpọ anụ mara mma nke zuru oke maka ịga ma ọ bụ njem.
Nke gara aga: Nkọwa dị elu Nnọchi Anya Anya - Anya etemeete-BD15-DW - JOYO
Osote: Etemeete ahịhịa-14 ahịhịa
Ndị ọkachamara etemeete Brush Setịpụrụ
Etemeete ahịhịa-14 ahịhịa
JOYO © Ikike niile echekwabara. Featured ngwaahịa, Sitemap, Matte Eyeshadow Palette, Shimmer Lipstick, Obere lipstick, Kacha mma ude Eyeshadow, Anya Anya ọla edo, Ihe kacha mma, Ngwa niile